ဇွန် 2013 - RayHaber
တစ်လ: ဇွန်လ 2013
ACCI ဟာအစာရှောင်ရထား xnumx'y ကုန်စည်ပြပွဲအတူတက်ဖမ်းရန်တွန်းအားပေးနေသည်
ACCI, မြန်နှုန်းမြင့်မီးရထား xnumx'y ကုန်စည်ပြပွဲ၏တိုးတက်မှုများအတွက်တွန်းအားပေးနေသည်။ Burdur နှင့် Isparta အဆိုပါ 2016 ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ကိုလက်ခံရရှိများအတွက် Eskisehir-အစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်းလုပ်ဖို့နီးကပ်စွာဆက်စပ်ဖြစ်ပါသည်, ကျနော်တို့အရေးယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Isparta point ရဲ့မြို့၏အကျိုးစီးပွားအတွက် ITSO ဖွဲ့စည်းစည်းလုံးညီညွတ်ရေးတိုးမြှင့်ဖို့ Xnumx.ankar [ပို ... ]
Metro လေ့လာရေးခရီး Taksim ပြန်သာမန်ဖို့ဖြစ်တယ်
Taksim မက်ထရိုအတွက်လေ့လာရေးခရီးသွားကပုံမှန်မှပြန်လာသော: အကိုရေပိုက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း Taksim မက်ထရိုအတွက်ရေနှင့်ပြည့်စုံစက် blasting ၏ရလဒ်ကယ်ဆယ်ရေးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုနေတဲ့အချိန်ပြီးနောက်ပုံမှန်ပြန်ရောက်အဖြစ်။ သမ္မတနိုင်ငံရိပ်သာလမ်းပေါ်မှာတည်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစက်စျေးဆိုင်များဖြိုဖျက်ပေါက်ကွဲမှုကာလအတွင်းရေပိုက် [ပို ... ]
TCDD တာဝန်အရှုံး£ 99 သန်းခဲ့
ကြောင်းစုစုပေါင်းအလုပ်ဆုံးရှုံးမှု 99 ပြည်နယ်ပိုင်ဆိုင် Enterprises (လည်ပတ်သော) ၏ပထမဦးဆုံးလေးပုံတပုံယခုနှစ် 2013 ၏ပထမသုံးလပတ်အတွင်းနီးပါးရှိပါသည်စုစုပေါင်းတာဝန်ဆုံးရှုံးမှု၏အဆုံးမြှုတ်လည်ပတ်သော၏ 168 နှစ်ပေါင်း: TCDD သန်း 2013 နှုန်းတာဝန်ဆုံးရှုံးမှုခဲ့သည် [ပို ... ]
Avcılar Metrobus ဘူတာခုံးကျော်တံတား-Şükrübeyပြန်လည်ဆန်းသစ်
AVCILAR-ŞÜKRÜBEY Metrobus ဘူတာရုံမြေပေါ်ဖြိုဖျက်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်တည်ဆောက်လိမ့်မည်။ အဆိုပါအစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်စာနယ်ဇင်းအကြံပေးဖြင့်ကြေညာချက်အရ, အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်, Metrobus ဘူတာနှင့်သုံးစွဲမှုလူကူးမသန်စွမ်း Access ကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အပိုအဆင်ပြေ Hale ကကိုယူခဲ့ဖို့အသစ်တစ်ခုအလုပ်အဖွဲ့၏နယ်ပယ် [ပို ... ]
Keçiörenမြေအောက်ယခုဥမင်လိုဏ်ခေါင်း၏အဆုံးကိုကြည့်ပါအဖြစ်အကြီးအရှိန်အဟုန်မှာလေ့လာရေးဆက်ပြောသည်။ Kecioren မြို့တော်ဝန် Mustafa AK, ပို့ဆောင်ရေး, သင်္ဘောများနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Binali Yildirim လည်း Erzincan ၏ Kemah ခရိုင်တက်ရောက်ခဲ့သည်Koçkarကျေးရွာလူမှုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်, ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်နှင့်ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်ပါသည် [ပို ... ]
အဆိုပါလမ်းရထားလိုင်းကိုအတွက် Bursa T1 အလုပ်နောက်ဆုံးအဆင့်တွင်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်
အဆိုပါလမ်းရထားလိုင်းကိုအတွက် Bursa T1 အလုပ်နောက်ဆုံးအဆင့်တွင်ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်: IL အဘိဓါန် Central ဂိုဒေါင် T1 လမ်းရထားလိုင်းကိုနှင့်အတူစင်တာများမှာ Bursa တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်အဆင်ပြေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလေ့လာမှုများပန်းပု 25 ရက်ပေါင်းပြီးစီးခဲ့ပါလိမ့်မည်အတူတကွတတ်၏။ ပန်းပုအဘိဓါန် Central ဂိုဒေါင် T1 လမ်းရထားလိုင်းကိုဆောက်လုပ်ရေးနောက်ဆုံးအဆင့်တွင်ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ [ပို ... ]
စစ်ပွဲxnumx.dünyနှင့်xnumx.dünyစစ်ပွဲနောက်ပိုင်းနှစ်များတွင်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားမီးရထား, လူ့အတွက်အရပ်သားအဖြစ်စစ်တပ်လယ်ကွင်းနှစ်ခုလုံး, စီးပွားရေးနှင့်နိုင်ငံရေးအသိအကျိုးရှိစွာသည်နှင့်အစဉ်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်နေသောအရာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏စိတ်ကူး mode ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ မီးရထား; အဆိုပါမြန်နှုန်းဤပြဿနာအပေါ် '' စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ [ပို ... ]
ရွှေချိုမက်ထရိုတံတား၏ 430 180 ခြေလျင်သန်းပေါင် costed
ရွှေချိုမက်ထရိုတံတား၏ 430 180 ခြေလျင်တဦးတည်းကိုဆက်သွယ်နေတဲ့တံတား 29 သန်းပေါင်အကြောင်းကိုကုန်ကျခဲ့သည်Azapkapıနှင့်အတူအောက်တိုဘာလနှင့်Unkapanıအတွက်ဖွင့်လှစ်ရန်စီစဉ်ထားသန်းပေါင် 180 costed ။ အစ္စတန်ဘူလ်မြေအောက်ရထား၏အရေးကြီးသောဆိပ်ကမ်းတစ်ခုမှာ [ပို ... ]
LEITNER အတွက် 24 မေလ 2012 Bursa, တူရကီအတွက်တရားဝင်ဖွင့်ပွဲဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ ကဏ္ဍ Leitner ရဲ့ရုံး၏ကုမ္ပဏီများကဦးဆောင်သည့်ကေဘယ်လ်ကြိုးကားကိုနေဆဲ Bursa, တူရကီတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။ LEITNER ropeways သုံးခုအဓိကဒေသများရှိတူရကီအတွက်ရှေ့မှောက်မှရောက်လေပြီ။ ဤရွေ့ကားနေသောခေါင်းစဉ်: ဆောငျးရာသီအားကစား, ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်မြို့ပြ [ပို ... ]
ရီရဲဗန်မိုဟာမက် Reis မှတီဟီရန်ရဲ့သံအမတ်ကြီးအာမနေီအစိုးရအီရန်-အာမေးနီးယားမီးရထားမှခြေလှမ်းများယူသင့်ကြောင်းပြောခဲ့သည်။ "နှစ်ပေါင်းငါတို့သည်အီရန်-အာမေးနီးယားရထားလမ်းအကြောင်းကိုညှိနှိုင်းခဲ့ကြသည်။ ဒီမျဉ်းအာမေးနီးယားမှလာမယ့်သီတင်းပတ်အတွင်း5တထောင်အီရန်ခရီးသွားဧည့်အဆုံးသတ်အခါ။ အာမေးနီးယားမိမိ၏ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်ပေါ်မှဆောက်လုပ်ရေးဖြည့်စွက်ရန် [ပို ... ]
ဝန်ကြီးချုပ်မက်ဗီဒက်, အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များနှင့်စိတ်ဝင်စားပါတီများရထားလမ်းကဏ္ဍတွင်တီထွင်မှုဆွေးနွေးကြမည်: ရုရှားရထားလမ်းကဏ္ဍတွင်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုမှလာမယ့်နေကြသည်။ အစိုးရကစာနယ်ဇင်းဝန်ဆောင်မှုဝန်ကြီးချုပ် Dmitry Medvedev သည်မြို့တော်အတွင်းရုရှားမီးရထားဘူတာရုံဧရိယာယနေ့သိပ္ပံနည်းကျနှင့်Rıjskovကနေကြေငြာချက်အရ [ပို ... ]
အဆိုပါတူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်းအတွက်အခြေခံအဆောက်အအုံအလုပ်ပြီးစီးခဲ့ပြီး၏ 90 ရာခိုင်နှုန်းကို
အခြေခံအဆောက်အအုံအလုပ်တူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်းအား 90 ရာခိုင်နှုန်းခန့်ပြီးစီးခဲ့ပြီး: TCDD ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် İsa Apaydınသည်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်းအားသည်, "အခြေခံအဆောက်အအုံအဆိုပါ superstructure ပေါ်မှာငါတို့လေ့လာမှု 90 ရာခိုင်နှုန်းခန့်ပြီးစီးလုပျ၏အမှုဖြစ်ပါသည် [ပို ... ]
YHT တိုက်ခိုက်ရာမှKütahyaလက်ထောက် Hasan Fehmi Kinay
YHT တိုက်ခိုက်ရာမှKütahyaလက်ထောက် Hasan Fehmi Kinay: AK ပါတီKütahyaလက်ထောက် Hasan Fehmi Kinay ရဲ့အမြင့်မြန်နှုန်း Tren'n ရဲ့ (YHT) Kütahyaကနေသွားအားထုတ်မှုအပေါ်ပါးစပ်နှင့်ကျမ်းစာ၌ရေးထားဝန်ကြီးအဆင့်ကြာပါသည်။ ခဏတစ်လွန်ခဲ့တဲ့ yht'n, SOE ကော်မရှင် [ပို ... ]
ပြန်လည်သုံးသပ် TCDD အာဏာပိုင်တွေက Kartepe Make
TCDD ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်: TCDD အရာရှိကြီးများ Kartepe ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း Make İsa Apaydınတူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်း2။ ဇာတ်စင်Köseköy Vezirhan ဆောက်လုပ်ရေး Sapanca-Izmit Kartepe အကြားရာ၌အစီအမံမှသတို့သမီးကိုတွေ့မြင်ဖို့အားလုံးကိုကျော်ထံမှလာ၏။ အဆိုပါ YHT စီမံကိန်း [ပို ... ]
BTK မီးရထားစီမံကိန်းပထမဦးဆုံး Ray ရင်းမြစ်အားဂုဏ်ပြုကျင်းပခဲ့သည်
ဒါကစီမံကိန်းကိုပဲအဇာဘိုင်ဂျန်, ဂျော်ဂျီယာ, တူရကီမဟုတ်ဖြစ်ပါတယ် "ဟုအဆိုပါဘာကူ-Tbilisi-Kars ရထားလမ်းစီမံကိန်းကိုနှင့် ပတ်သက်. , ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Binali Yildirim; BTK စီမံကိန်းကိုပထမဦးဆုံး Ray ရင်းမြစ်အားဂုဏ်ပြုကျင်းပခဲ့သည် ဗဟိုအာရှသမ္မတနိုင်ငံစီမံကိန်းဘော်လကန်ထဲမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့စီမံကိန်းအား [ပို ... ]
ရွှေချိုမက်ထရိုတံတား၏ 430 29 ခြေလျင်အောက်တိုဘာလအတွက်အဖွင့်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်
ရွှေချိုမက်ထရိုတံတား၏ 430 29 ခြေလျင်အောက်တိုဘာလအတွက်အဖွင့်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်: အပြည့်အဝမြန်နှုန်းမှာမြေအောက်တိုးတက်မှုအတွက်အစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့ရွှေဦးချိုမက်ထရိုတံတားအလုပ်၏အရေးကြီးသောဆိပ်ကမ်းတစ်ခုမှာ။ Azapkapıနှင့်အတူအောက်တိုဘာလနှင့်Unkapanıအတွက်ဖွင့်လှစ်ရန်စီစဉ်ထား 29 တဦးတည်းချိတ်ဆက် [ပို ... ]
TCDD: ကျန်း-Kayaşဇွန်လခရီးသွားလက်မှတ်ရထားစစ်ဆင်ရေးအတွက် 15 အကြားပေးအပ်
TCDD: ကျန်း-Kayaş 15 အကြားဇွန်လခရီးသွားလက်မှတ်ရထားစစ်ဆင်ရေးလက်ထောက် Ilhan Cihaner ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးနှင့်အတူ TCDD သည် CHP Denizli ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Binali ဇွန်လတွင်ဆင်ခြေဖုံးတူရကီ၏ running အကြောင်းတရားများကြောင့်ပေးထားရေးသားထားသောပြဿနာ၏အကြောင်း Lightning, 15 ဖြေဆိုရန်မေတ္တာရပ်ခံ [ပို ... ]
Konya အတွက်2။5တစ်နှစ်အဆင့်လမ်းရထားစီမံကိန်းအားပြီးစီးလိမ့်မည်
Konya အတွက်2။ ဒသမဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အဆင့်အဆိုအရလမ်းရထားစီမံကိန်းအား5နှစ်ပေါင်းပြီးစီးခဲ့ပါလိမ့်မည်, 455 ကနေတစ်နှစ် 2018 787 သည်အထိတူရကီအတွက်မြို့ပြရထားလမ်းစနစ်များ၏အရှည်ကီလိုမီတာထုတ်ပေးခံရဖို့ကီလိုမီတာ။ Konya အတွက်အစီအစဉ်သစ်ကာလ2။ အဆင့်လမ်းရထားစီမံကိန်းအားပြီးစီးလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ [ပို ... ]
အသုံးပြုသူအဆင်ပြေအသစ်တစ်ခုအစီအစဉ်ဤကတ်များBurulaşအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အသုံးပြုကြသည်ဤကတ်များနှင့်အတူခရီးသွားနိုင်ငံသားများ Bursa ကျင်းပခဲ့သည်ကယ်တင်တတ်၏။ ထို့ကြောင့်, စာရင်းသွင်းထားသောကဒ်တစ်ဦးမဖြစ်မနေအသုံးပြုသူစွဲချက်ငွေပြန်အမ်းနိုင်ပါတယ်အဖြစ်ကဒ်ကိုမသုံးနိုင်သူနိုင်ငံသားများသည်။ စေBURULAŞ [ပို ... ]
သတင်း Flash ကို! Taksim မီထရိုဘူတာအဝင်ဝရပ်တန့်
28 / 06 / 2013 Levent Ozen 0
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းကိုစက်စဉ်အတွင်းပြုသောအမှု Taksim လမ်းသွားလမ်းလာအလုပ်ကိုရေပိုက်ဖွင့်မှုတ်။ input ကိုကြောင့် Taksim မီထရိုဘူတာ waterlogging မှရပ်တန့်ခဲ့သည်။ Taksim ရေပိုက်အတွက်လမ်းသွားလမ်းလာများ၏စီမံကိန်းများ၏အတိုင်းအတာအတွင်းအလုပ်လုပ်တယ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစက်အဆိုပါ ischial ပိုင်ဆိုင်ကွဲ။ ပိုက်ကနေ [ပို ... ]